January 27, 2022 - ApannPyay Media
January 27, 2022 by ApannPyay Media
အဘအောင်မင်းခေါင် ပုပ္ပားတောင်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ တဘောင်စာနှင့် မိုးလင်းတော့မည့် မြန်မာပြည် အဘအောင်မင်းခေါင် ပုပ္ပားတောင်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ တဘောင်စာနှင့် မြန်မာပြည် အနာဂတ်ကို ကြိုသိနေသလော… မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်မှု‌များဆက်စပ်နေတဲ့ သဲလွန်စ တဘောင်တစ်ခုကို လေ့လာမိပါတယ်။ ဘယ်လိုစပ်ဆက်နေသလဲဆိုတော့ ၁၃၁၀ ခုနှစ်မှ ၁၃၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဘိုးတော်အောင်မင်းခေါင် ပုပ္ပါး တောင်ကလာပ်မှာ ရေးဆပ်ခဲ့တဲ့ တဘောင်စာက ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ “လွဲမထွက်သာ ဝဲဘက်ယာပါမှ ဇတ်မဟာရုပ်စုံထွက်ပြီမို့ မိုးလင်းရင် ဇတ်တော်သိမ်းမည်တဲ့ ပတ်ဆော်ကာ ကပ်ကျော်မဲ့ကိန်း”ပါပဲ ဆိုတဲ့ ကိုးန၀င်းတဘောင်စာထဲက နောက်ဆုံးအပိုဒ် စာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းအဓိပ္ပါယ် ပြန်ကြည့်ရင် “လွဲမထွက်သာ ၊ ဝဲဘက်ယာပါမှ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဝဲယာမတူညီတဲ့ အမြင်အငြင်း အခုန်များနှင့်အတူ “လွဲမထွက်သာ” တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ စစ်တပ်နှင့်အစိုးရဟူ၍ … Read more
အောင်မြင်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင် ဖြစ်ဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းများ
အောင်မြင်တဲ့ ကွမ်းယာဆိုင် ဖြစ်ဖို့အတွက် လျှို့ဝှက်နည်းလမ်းများ ကွမ်း – ကွမ်း ဝယ် ရာ တွင် စီးပွားရေး အမြင်အရ ကွမ်းရွက်သေးသေး ကိုသာ ဝယ်ရမည် ။ အရွက်သေးပါက ပိဿာလိုက် ဝယ်ယူရာ တွင် ရွက်ရေများများ ပိုရသဖြင့် ကွမ်းယာ အထွက်ပိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ကွမ်းရွက် ကို အရင်း(အရိုး)ဘက်နှင့် အဖျားဘက်ကို ညှပ်ထား ရသည်။ ကွမ်းရွက်ကိုရေဆေးပြီး ဒိန်ချဉ်နှင့် စိမ်ကာ ကွမ်းဘန်းထဲ တွင် ညီညီညာညာ မျှတ လှပအောင် စိမ်ထားနှပ်ထားပါက မိမိဆိုင်မှ ကွမ်းယာကို စားလိုက်သည်နှင့် နုနုညံ့ညံ့ အရသာ ကို ရရှိစေပြီး စားသုံးသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည် ဖြစ်ပါ သည်။ ထုံး – ထုံးစပ်နည်း အလွယ်နည်း။။ … Read more
သင့်အသားအရေ ခြောက်ကပ်ကပ်မဖြစ်ပဲ စိုပြေနေစေဖို့ ရှောင်ရမယ့်အချက် (၇) ချက်
သင့်အသားအရေ ခြောက်ကပ်ကပ်မဖြစ်ပဲ စိုပြေနေစေဖို့ ရှောင်ရမယ့်အချက် (၇) ချက် သင့်အသားအရေ ခြောက်ကပ်ကပ်မဖြစ်ပဲ စိုပြေနေစေဖို့ ရှောင်ရမယ့်အချက် (၇) ချက်အမြဲတမ်း အသားအရေစိုစိုလေးဖြစ်စေဖို့ ဒီအချက်တွေကို ရှောင်ပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာလှပနေဖို့ ရေဓါတ်ပြည့်ဝဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က creamတွေ lotion တွေ လိမ်းပေမယ့် ရေဓါတ်ခန်းခြောက်နေသလို၊ မစိုမပြေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်လုပ်မိနေတဲ့ အပြုအမူတချို့ကြောင့်လည်း အသားအရေ ခြောက်ကပ်ကပ်ဖြစ်နေတာပါ။ ၁။ ရေအများအပြား သောက်ခြင်း=ရေကို လိုတာထက် ပိုသောက်မိတာကလည်း အသားအရေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ကျန်းမာဖို့ ရေဓါတ်ပြည့်နေရမယ် ဆိုပေမယ့် ရေဓါတ်လွန်ကဲတဲ့အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေကို တစ်နေ့သောက်သင့်တဲ့ ပမာဏထက်ပိုပြီး မသောက်သင့်ပါဘူး။ ၂။ ရေချိုးချိန်ကြာခြင်း=ရေကြာကြာချိုးတာက တစ်နေကုန် ပင်ပန်းမှုတွေကို အပန်းပြေစေပါတယ်။ … Read more
သင့် ဖုန်းလေးလံခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အချက်များ
သင့် ဖုန်းလေးလံခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အချက်များ ဖုန်းသုံးသူတိုင်း….သိထားသင့်တဲ့ ….ဖုန်းလေးလံခြင်းကို… ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့်… အချက်များ ၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ Junk File တွေ Cache file တွေကို နေ့စဉ် ဖုန်းမှာ နဂိုပာဝင်တဲ့ Cleaner နဲ့ရှင်းလင်းပေးပါ။ ၂. Live wallpaper Live wallpaper တွေဟာ background မှာ အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Ram ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံးနေရာယူထားပြီး ဘတ္တရီကိုလည်း အချိန်နဲ့အမျှစားသုံးနေပါတယ်။ ဒီတော့ live wallpaper … Read more
ဟိုးတချိန်တုန်းကဆေးလိပ်ခုံထောင်ပြီးလေယဉ်ပျံဝယ်စီးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရှိခဲ့ဘူးတယ် ဖဆပလ ခေတ်ကGoldenland လို့အခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်မူနဲ့ကျဆုံးလိုက်တာ ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ၅ရက်မှာတော့ကားနဲ့ပါတိုက်သတ်တဲ့အဆင့်ကိုထိုးကျသွားပြီ။ ကျနော်သိခဲ့တဲ့ဆေးပေါ့လိပ်ဈေးကွက်။ နွားတံဆိပ် အင်းစိန်မှာတော့ဘုရင် အင်းစိန်ထောင်မှာနွားမရှိရင်အလုပ်ကမဖြစ်။RITစက်မူတက္ကသိုလ် မှာလည်းနွားမှနွားဘဲ။ထူးဆန်းတာနွားဆေးလိပ်ကအင်းစိန်မှာဘဲရမယ်။အခြားနေရာမှာရှာလို့မတွေ့ဘူး ခြင်သေ့၃ကောင် ရခိုင်မှာ၁၉၇၀လေဘေးဖြစ်ကထဲကခြင်သေ့၃ကောင်ကဈေးကွက်ချုပ်လိုက်တာ။ ကျားဆေးလိပ်ကလည်းအံ့ဩစရာ။ အားလုံးအမျိုသမီးနာမည်နဲ့ထွက်ကျားမသန်းဌေး။ကျားပျံမကောက်။ကျားပျံမရွှေဝါ။အပေါဆုံးကတော့၅ပြားတန်ကျားမသန်းဌေး(စိတ်အဝင်စားဆုံးကဘယ်သူကအမေဘယ်သူကသမီးသိချင်လို့ကျားမိသားစုfamilytreeသိရင်မျှဝေစေခြင်။) ဂျိုးသိန်း။ရွှေပြည်စိုး။ငွေတောင်။စက်ြာ။နဂါး။သူတို့က လည်းသူ့ဈေးကွက်နဲ့သူ။ ဖတ်ကြည့်ပါမြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့Business Management skill နဂါးဒေါ်ဦး နိုင်ငံကျော် နဂါးဆေးလိပ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတခု မန္တလေးမြို့လယ်မှာ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီဆေးလိပ်လုပ်ငန်းကြီးကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၈ဝ အိန္ဒိယ ဗမာ အဓိကရုဏ်းအပြီးမှာ တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ဆေးလိပ်ဖြန့်ချိရေးတွေကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နဂါးတံဆိပ် ရန်ကုန်ဆေးလိပ်ဆိုပြီး အဓိကရုဏ်းအေးငြိမ်းတဲ့အထိမ်းအမှတ် ခင်မောင်ရင်ရဲ့ နဂါးနီသီချင်းနဂါးတံဆိပ် ရန်ကုန်ဆေးလိပ်ဆိုပြီး အဓိကရုဏ်းအေးငြိမ်းတဲ့အထိမ်းအမှတ် ခင်မောင်ရင်ရဲ့ နဂါးနီသီချင်းနဲ့ ရောင်းချခဲ့လို့ နဂါးနီဆေးလိပ်လို့လည်း လူသိများပါတယ်။ ဒီဆေးလိပ်လုပ်ငန်းကို သမီးခင်ပွန်းနှစ်ယောက် … Read more
တနေ့ကြက်ဥ (၂) လုံး ဥအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဂျပန် နှင့် ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်‌နေကြဆဲ ‌ရွှေမြန်မာတွေ
တနေ့ကြက်ဥ (၂) လုံး ဥအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ဂျပန် နှင့် ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်‌နေကြဆဲ ‌ရွှေမြန်မာတွေ ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်‌နေကြဆဲ ‌ရွှေမြန်မာတွေ.. ဂျပန်တွေက ကြက်မတစ်ကောင်ကို တစ်နေ့ ၂ လုံး ဥအောင် လုပ်လိုက်ပြီ။ အောင်မြင်တယ်။ တစ်နေ့ ၂ လုံးဥတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့.. တစ်နေ့တာ ၂၄ နာရီကို တစ်နေ့ ၁၂ နာရီ လုပ်လိုက်တယ်။ ဥကြက်မတွေကို ပြင်ပလောကနဲ့ ပေးမတွေ့ဘူး။ အလုံလုပ်ထားတယ်။ ၆ နာရီ အလင်းရောင် ပေးတယ်။ ၆ နာရီ အမှောင်ချထားလိုက်တယ်။ ကြက်မတွေက တစ်နေ့မိုးချုပ်ပြီထင်ပြီး ဥတစ်လုံး ဥချလိုက်တယ်။ ပြန်ပြီး မိုးလင်း လာသယောင်ယောင် ၆ နာရီ အလင်းရောင်ထပ်ပေးတယ်။ ပြီးရင် ပြန်အမှောင်ချတယ်။ နောက်တစ်နေ့ထင်ပြီး … Read more
ပယောဂဆရာ ဦးကိုနီနဲ့ ရွှေဘိုနယ်က သက်ရှည်ဖုတ်ကောင်ကြီး (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ပယောဂဆရာ ဦးကိုနီနဲ့ ရွှေဘိုနယ်က သက်ရှည်ဖုတ်ကောင်ကြီး (ဖြစ်ရပ်မှန်) ထိုအချိန်က အထက်မြန်မာပြည်တည်ငြိမ်မှုမရှိ ၊သူခိုး၊ဓားပြတို့ကလည်း သောင်းကျန်း မင်းမူနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ၁၂၇၄ သီပေါမင်းပါတော်မူပြီးစအချိန်ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးကလည်း ရှုတ်ထွေးနေပြီးမြို့ရွာအုပ်ချုပ်သည့်အမှုထမ်းအရာထမ်းတို့သည် လည်းလွန်စွာအလုပ်ရှုတ်နေချိန် ။ပြည်သူလူထုရပ်သူရွာသားတို့သည်လည်း အစဉ်အမြဲသတိနှင့်နေကြရပြီး အသက်ကိုဖက်နှင့်ထုတ်၍နေကြရချိန်။ နေရာက ရွှေဘိုနယ်က ရွာတစ်ရွာ။ ” ဒူ……..ဒူ….” သူကြီး ဦးထွန်းလူအိမ်မှမောင်းသံသည် အရာရာအားဖုံးအုပ်ကာ ကျယ်လောင်စွာပေါ်လာခဲ့သည်။ ရွာသူရွာသားတို့သည်မောင်းသံကြောင့်လုပ်လက်စအလုပ်များကိုပစ်ချထားခဲ့ကာ သူကြီးအိမ်သို့ စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်။ဤမောင်းသံသည် အရေးတစ်ကြီးကိစ္စရှိ၍သာ စုဝေး ရန် အချက်ပေးသောသူကြီး၏ မောင်းသံဖြစ်ကြောင်း ရွာသူရွာသားအားလုံး နားလည်ထားကြသောကြောင့် ဤကဲ့သို့ အလျင်အမြန်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့မောင်းသံကြားလျှင် ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ အရက်မူးပြီး အော်ဟစ်ဆဲဆို ရောက်ရှိလာတတ်သည်က ရွာကာလသားခေါင်း ဆယ်မောင်။ ယခုလည်း ထိုနည်း၎င်းပင် ဆယ်မောင် မူးယစ်ဆဲဆိုပြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ “ဆယ်မောင် တို့ကတော့ကွာ မမူးတဲ့နေ့မရှိပါလား အခုအရေးကြီးနေပြီ … Read more
တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အာလူးအခွံတွေကို အလွယ်တကူ လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့
တန်ဖိုး ရှိတဲ့ အာလူးအခွံတွေကို အလွယ်တကူ လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့ နည်းမသိသေးရင် အရမ်းနစ်နာပါတယ်။ အာလူးအခွံတွေကို ဒီအတိုင်း အလွယ်တကူ လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့။ လုပ်နည်း ပြောပြပါ့မယ်… ရေအေးအေးထဲမှာ ဆားလေးနည်းနည်းခပ်ပြီး အားလူးအခွံတွေကို တစ်ညအိပ် စိမ်လိုက်ပါ။ နောက်နေ့မနက်ကျရင် အဲ့ဒီရေစိမ်ထားတဲ့ အာလူးအခွံတွေကို ရေထဲက ဆယ်လိုက်ပါ။ ရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်းနဲ့ ၂ ဇွန်း၊ သကြားတစ်ဇွန်းထည့်ပီး မွှေပါ။ ပြီးရင် ဇကာခုံးလေးထဲထည့်၊ ရေစစ်ပြီး နေပူပူမှာ ၆ နာရီကြာ လှန်းထားလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့… လေလုံပလပ်စတစ် အိတ်အမဲထဲထည့်ပြီး ထိပ်က စုချည်ထားလိုက်ပါ။ အချိန်ကျလို့ ခေါင်းလောင်းတီးပြီး မောင်းလာတဲ့ ကားစိမ်းစိမ်းကြီးတွေ့ရင် ‘အောင်ပြီ’… လို့မှတ် အဲဟာ စည်ပင်သာယာက အမှိုက်သိမ်းကားပဲ။ အဲ့ကားပေါ်ကို ခုန အိတ်အမဲကို ပစ်တင်လိုက်ပါ။ ဒါပါပဲ။ … Read more
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေက သြဇာ အရှိဆုံးလဲ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပတ်စ်ပို့တွေက သြဇာ အရှိဆုံးလဲ ပြည်ပ နိုင်ငံတွေကို ခရီးသွားလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ပတ်စ်ပို့လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ဟာ အရေးပါဆုံး မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် ပတ်စ်ပို့တွေကို စတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သူကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ပဉ္စမ ဟင်နရီ ဘုရင်ဖြစ်ပြီး အေဒီ ၁၅ ရာစု အစောပိုင်းကတည်းက ရှိနေခဲ့ပြီလို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မိမိနိုင်ငံသားတွေ တခြား ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို သွားလာနိုင်စေဖို့အတွက် ပတ်စ်ပို့တွေကို ထုတ်ပေးထားကြပေမယ့် နိုင်ငံအလိုက် ရရှိတဲ့ အခွင့်အရေးချင်းတော့ မတူညီကြပါဘူး။ ပတ်စ်ပို့ချင်း တူပေမယ့် ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ပတ်စ်ပို့အလိုက် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့ သွားလာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ အရေအတွက်ချင်းက မတူညီကြပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံပြီး စီးပွားရေး တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ … Read more
Mi ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် miဖုန်းကိုကိုင်ထားရင်အရေးကြီးသိထားရမည့်အချက်များ
Mi ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ် miဖုန်းကိုကိုင်ထားရင်အရေးကြီးသိထားရမည့်အချက်များ သာကောတို့အကြံကမသေးတာအမှန်ပါ မြန်မာအများစုကတော့ နောက်ပေါ်ရင်ဝယ်မယ်ဆိုတာပဲသိတာပါ အခုဆို mi ဖုန်းကိုင်သူ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးပုံတပုံနီးပါးရှိနေကြပါပြီ ကိုင်ကောင်းပြီးဈေးချိုရင်ပြီးယောသုံးနေတဲ့သူတွေသိကြဖို့ပါ အခုလို ဆင်ဆာတွေထည့်ထားတာဟာအသုံးပြုသူရဲ့လုံခြုံရေးကိုအရမ်းထိခိုက်စေပါတယ် အရေးမကြုံသေးလို့မသိပေမယ့် အကောင့်ဟက်ခံရတာမျိုးတို့ စက်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေပြောင်းလဲလာတာမျိုးတို့ဆိုသတိထားပါ အဲ့ဒါဆိုသင့်ဖုန်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နေပါပြီ ဆင်းကဒ်တွေပေါလာသည်နှင့်အမျ လူတိုင်းဝယ်ကိုင်နေကြပြီး အင်တာနက်ဘေတွေအလိုလိုပျောက်တာ အပ်ဒိတ်တွေအလိုလိုတက်တာမျိုးတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ် အခုလိုအဖြစ်အပျက်တွေကို လစ်ယူယေးနီးယားနိုင်ငံမှာ စတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် people mediaမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံထုတ် မီဖုန်းများတွင် လိုအပ်သလိုစိစစ်ဖြတ်တောက်နိုင်သည့် ပစ္စည်းကိရိယာမျာထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း အစိုးရအစီရင်ခံစာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် တရုတ်မီမိုဘိုင်းဖုန်းများကို ဝယ်ယူခြင်း မပြုရန်နှင့် ဝယ်ယူထားသူများလည်း ပြန်လည်စွန့်ပစ်ရန် လစ်ယူယေးနီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ် အသုံးပြုခြင်းမပြုခြင်းကတော့ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ဆန္ဒသာဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတ အသိပညာရစေခြင်းအတွက် myanmaralinn မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား myanmaralinn Mi ဖုန္းဝယ္မယ္ဆိုရင္သို႔မဟုတ္ miဖုန္းကိုကိုင္ထားရင္အေရးႀကီးသိထားရမည့္အခ်က္မ်ား သာေကာတို႔အႀကံကမေသးတာအမွန္ပါ ျမန္မာအမ်ားစုကေတာ့ ေနာက္ေပၚရင္ဝယ္မယ္ဆိုတာပဲသိတာပါ အခုဆို … Read more